ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အတိမဟန္တဒုန္ဒုဘစည်တော်ကြီး ရွှေဘိုမြို့မှ စစ်ကိုင်းရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော်ေ? - Yangon Media Group
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အတိမဟန္တဒုန္ဒုဘစည်တော်ကြီး ရွှေဘိုမြို့မှ စစ်ကိုင်းရာဇမဏိစူဠာ ကောင်းမှုတော်ေ?
ရွှေဘို၊ မတ် ၁၉ – စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ရွှေဘိုမြို့ ချမ်းသာကြီး ဘုရားသို့ မတ် ၁၈ ရက် ည ၈ နာရီကရောက်ရှိခဲ့သော ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အတိမဟန္တဒုန္ဒုဘ စည် တော်ကြီးမှာ ချမ်းသာကြီးဘုရားတွင် တစ်ညတာအပူဇော်ခံပြီး မတ် ၁၉ ရက် နံနက် ၆ နာရီ မိ နစ် ၄ဝ တွင် ရွှေဘိုမြို့မှ စည်တော် ကြီးထားရှိမည့် စစ်ကိုင်းမြို့ ရာဇမဏိစူဠာကောင်းမှုတော်စေတီ တော်သို့ ဆက်လက်ပင့်ဆောင်သွား ပြီဖြစ်ကြောင်း ချမ်းသာကြီးဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့မှသိရသည်။
အဆိုပါစည်တော်ကြီးအား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်နှင့် ဇနီးဒေါ်တင့်တင့်လာရောက်ကြည်ညိုခဲ့ပြီး ရွှေဘိုမြို့ရှိ ချမ်းသာကြီးဘုရားတွင် စည်တော်ကြီးရောက်ရှိသည့် မတ် ၁၈ ရက် ညပိုင်းတွင် စည်တော် ကြီးကိုအကြောင်းပြု၍ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီး မှူး၍ သီတဂူ ဒေါက်တာအရှင် ဣန္ဒာစရိယ၏ အထူးတရားပွဲကို ည ၉ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အင်းတော်မြို့နယ် လက်ပံကုန်း ကျေးရွာရှိ ”ဆရာပွဲ” မြန်မာ့တူရိ ယာအမျိုးမျိုးလုပ်ငန်းမှ နှစ်ပေါင်း ၁၅ဝ ကျော် သက်တမ်းရှိ ကုက္ကို သားဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သစ်လုံး ထွင်းစည်တော်ကြီးကို မဟာဗုဒ္ဓ ဝင်ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွများဖြင့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် စတင်ထုလုပ်ပူဇော်ပြီး ၂ဝ၁၈ ခု နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ထုလုပ် ပြီးစီးခဲ့ကာ အဆိုပါ စည်တော်ကြီး ကို မတ် ၁၈ ရက် ညပိုင်းတွင် ကောလင်းမြို့မှ ရွှေဘိုမြို့သို့ ပင့် ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အတိမဟန္တ ဒုန္ဒုဘစည်တော်ကြီးမှာ အလျား ၁ဝ ပေ ရှစ်လက်မစည်တော်မျက် နှာဝအကျယ် ငါးပေ၊ လေးလက်မ လုံးဝန်းပတ် ၁၇ ပေ ရှစ်လက်မရှိ ပြီး စည်တော်မျက်နှာပြင်အတွက် ကျွဲသားရေနှစ်ချပ်နှင့် စည်တော် စည်ကျစ်ကြိုးအတွက် နွားသားရေ ၁၈ ချပ်ကို အသုံးပြုထားရှိပြီး စည်တော်ကြီး၏ ဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်တွင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ ၁ဝ၈ ကွက်သော ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာ စက်လက္ခဏာအား နတ်သားများ ပူဇော်နေသည့်ပုံထည့်သွင်း၍ ထု လုပ်ပူဇော်ထားပြီး စည်တော်ကြီး ၏ အတွင်းပိုင်းတွင် ဘုရားအနေ ကဇာတင် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော် ဓါရဏပရိတ် ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း ရှင်သီဝလိဂါထာတော် ဗားမဲ့ဆ ရာတော်၏ ဘုရားလေးဆူအင်းကြီး လေးကြီးအင်း ရွှေတိဂုံစေတီတော် မှ ပဌမံအင်းကွက်တော် ၁ဝ၈ ကွက် ဂါထာတော်များ ထွင်းထုပူ ဇော်ထားကြောင်း သိရသည်။
#YangonMediaGroup | #DemocracyToday
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းများ လုပ်သည့်အခါ ဒေတာအချက်အလက်များ မှန်မှန်ကန်ကန် ??
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်-နောင်ချိုလမ်းနှင့် မြစ်ငယ်-ထုံးဘို-ပြင်ဦးလွင် လမ်းပိုင်း လေးလမ်းသွား က?
ငါးဖမ်းသမားများအတွက် အလုပ်အကိုင်ကောင်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် သဘောတူညီချက် ထိုင်း လက်မှတ?
သတ္တမမြောက်နှင့် အဋ္ဌမမြောက် Mission: Impossible ရုပ်ရှင်များကို တစ်နှစ်သာခြားပြီးပြသမည်
မြန်မာမှုဒီဇိုင်း ပညာရှင် ဦးအေးမြင့်(မြန်မာမှု)၏ အသက် (၈၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် အထိမ်းအမှတ်ေ?
မိုးတွင်းကာလတွင် ရခိုင်စစ်ရှောင်များကို ယာယီစခန်း တည်ဆောက်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးမည်
အာဆီယံဒေသတွင် ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၇၅ဝ ခန့် ဆုံးရှုံးနိုင်
မန္တလေးမြို့ တံခွန်တိုင်နွားဘေးမဲ့ရုံတွင် (၇၂)ကြိမ်မြောက် သဒ္ဓါခိုင်မြဲ နွားဘေးမဲ့ပွဲ ပြုလု?